Mineum စျေး - အွန်လိုင်း MNM ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Mineum (MNM)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Mineum (MNM) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Mineum ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $121 243.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Mineum တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Mineum များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
MineumMNM သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0126MineumMNM သို့ ယူရိုEUR€0.0107MineumMNM သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00965MineumMNM သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0115MineumMNM သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.113MineumMNM သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0799MineumMNM သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.281MineumMNM သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0473MineumMNM သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0168MineumMNM သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0177MineumMNM သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.282MineumMNM သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0975MineumMNM သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0677MineumMNM သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.941MineumMNM သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.13MineumMNM သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0173MineumMNM သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0192MineumMNM သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.391MineumMNM သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0874MineumMNM သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.34MineumMNM သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩14.92MineumMNM သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦4.88MineumMNM သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.921MineumMNM သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.349
MineumMNM သို့ BitcoinBTC0.000001 MineumMNM သို့ EthereumETH0.00003 MineumMNM သို့ LitecoinLTC0.000235 MineumMNM သို့ DigitalCashDASH0.000145 MineumMNM သို့ MoneroXMR0.000146 MineumMNM သို့ NxtNXT1.03 MineumMNM သို့ Ethereum ClassicETC0.00189 MineumMNM သို့ DogecoinDOGE3.81 MineumMNM သို့ ZCashZEC0.000157 MineumMNM သို့ BitsharesBTS0.496 MineumMNM သို့ DigiByteDGB0.419 MineumMNM သို့ RippleXRP0.0453 MineumMNM သို့ BitcoinDarkBTCD0.000442 MineumMNM သို့ PeerCoinPPC0.0427 MineumMNM သို့ CraigsCoinCRAIG5.84 MineumMNM သို့ BitstakeXBS0.547 MineumMNM သို့ PayCoinXPY0.224 MineumMNM သို့ ProsperCoinPRC1.61 MineumMNM သို့ YbCoinYBC0.000007 MineumMNM သို့ DarkKushDANK4.11 MineumMNM သို့ GiveCoinGIVE27.75 MineumMNM သို့ KoboCoinKOBO2.92 MineumMNM သို့ DarkTokenDT0.0116 MineumMNM သို့ CETUS CoinCETI37